Miss et Mister Malagasy-Frantsa Hanampy ireo ankizy sahirana
Nigadona omaly teto an-tanindrazana i Sophie Randria sy Edwin Neverson, masoivohon’ny Miss & Mister Malagasy, any Frantsa.
Hanao hetsika sosialy hanampiana ireo ankizy sahirana 200 mahery eto amintsika no tena anton-dian’izy ireo, misandrahaka amina faritra telo dia ny eto Antananarivo sy Toamasina ary Mahajanga, toerana niavian’izy mianadahy ireto. Hizarana fitaovam-pianarana sy kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro avokoa ireo ankizy ireo, raha ny fantatra. Vola mitentina 32 tapitrisa Ar no hampiasainy amin’izany, vokatry ny fanangonam-bola nataon’izy ireo. Anisan’ny manohana azy ireo akaiky amin’ity asa soa sahaniny ity Ralantoarisoa Jay Sam, izay nitondra fanazavana fa ny mba hahafahana manome tanana ireo mpiray tanindrazana eto Madagasikara no tanjona. Tsiahivina fa tao anatin’ny folo andro monja no nahafahan’izy mianadahy ireto nanangona io vola voalaza etsy ambony io.
Pati sy Tsirinasolo